» Hadhaa Qabsoon qabdu dhamdhamuu dadhabuudhaan, qabsoo keessaa of moggeessuun amaluma qabsoo ti ---- Gadaa.com Oduu – News
Hadhaa Qabsoon qabdu dhamdhamuu dadhabuudhaan, qabsoo keessaa of moggeessuun amaluma qabsoo ti
Bitootessa/March 23, 2013 · Gadaa.com Camadaa Hundee irraa*
Qabsoo nama eddu taatee wajjin jalqabuu fi waadaa ykn hirbuu tokko wajjin yeroo seentu, hunduu wal bira dhaabata. Garuu qabsoo hirbuu seenteef xumuruuf hunduu akka gaafa wajjin hirbuu seeneetti xumurachuu hin danda’u. sababni isaa edduu dha. Kun ammoo amaluma qabsoo iti.
Qabsoo keessatti jaallan dura wajjin hirbuu seente sababa agara garaan karaarratti afu. Isaan keessaa amma tokko kaasuuf:
1. hirbuu seenan sana galmaan gauuf jecha jaallan wajjin hirbuu seenan biraa haarsaan kufanii afu. Jaallan akkanaa kun hirbuu cabsuun ykn dantaa dhuunfaan otoo hin taane gatii qabsoon gaafatu baasanii, imaanaa dhaammatanii, warra darbanii dha. Jaallan akkanaa kun yeroo hunda seenaa keessatti yaadatamaa fi kabajamaa deemu. Galiin isaan lubbuu isaanii dhabaniif jaallan biraan galma gaha. Maqaan isaanii hunda caala bakka hundatti dhageettii qaba. Lammiin isaaniin boona.
2. jaallan wajjin hirbuu saanan kan karaa irratti wal irraa afaniif dandeettii fi humna itti dhabuun, qaaman keessaa bahu. Jaallan akkanaa kun qaaman dadhaban malee sammuun isaanii waadaa fi hirbuu seenaniif yeroo hunda akka dhaabatanitti jiraatu. Qabsoo qaaman itti hirmaachuu dadhaban, amilee fi gorsaan qabsoo jajjabeessu. Jaallan akkanaa kun akka ambaa qabsootti ilaalamu. Yeroo hunda kabajaa qabu. Qaaman humni isaanii dadhabus yaadaan qabsoo deeggaru. Kan wal lole haraarsu. Aadaa keessa darban dhaloota barsiisu. Dhimma qabsoo dubbachuuf amilee fi honnee qabu. Qaaman hirmaachuu dadhabinis, qalbii fi honneen isaanii hirbuu qabsoo bira jira. Jireenya isaanii waanta itti dhabniif dhaabni isaanii isaan marara. Qabsoof jecha jiruu fi jireenya waanta itti hin horanneef yeroo hunda qabeenyi isaanii qabsoo fi qabsa’ota. Qabeenye honnee isaanii, qabsoo irraa laaffisu hin jiru.
3. jaallan hirbuu fi waadaa wajjin seenanii galma gahuu dadhaban inni biraa ammoo, hirbuu seenan dagatanii jiruu fi jeenya dhuunfaa, qabeenyaa fi mooksaa maalaqaan atamuu dha. Jaallan akkanaa kun yeroo hunda ni dubbatu malee waanta dubbatan sana warra hojiitti hiikuuf amilee qabu miti. Yeroo hunda qabsa’aa of fakkeessu malee, hadhaa qabsoon qabdu hin beekan. Yeroo hunda duubaa dubbatu malee fuundura bahanii gaaffii qabsoon gaafattu deebisuu hin danda’an. Jaallan akkanaa kana bubbeen dhufu hundi isaan fudhatee deema. Qabsoo maqaa itti argachuuf malee qabsa’uuf namoota fedha qaban miti. Amma isaaniif danda’ametti qabsoo irraa fayidaa argachuuf dhama’u malee, qabsoo fayidaa kennuuf qophii miti.
Yeroo hunda isaanitti kan muldhatu aangoo dhuunfaa fi qabsoo irraa fayidaa argachuu dha. Namoota akkanaa namni maalaqa qabu ykn fayidaa addaa kennuuf waadaa seeneef isaan hawwata. Qabsa’ota gurgurachuuf duubattti hin deebui’an. Kaleessa waltajjii irra dhaabbatanii qabsoo fi ummata isaaniif waanta hunda kaffaluuf qophii ta’uu isaanii kan ibsan of irraa mulqanii bakka faayidaan dhuunfaan argamtetti godaanu. Namootin akkasii namummaa fi eenyummaa akkasuma qaanii fi safuu oromoon qabu isaan bira hin jiru. Ni kolfu, ni gammadu, ni odeessu, ni wacu, ni fiigu, ni nyaatu, ni dhugu…. Waanti hundi isaan biratti fayidaa guyyaa wajjin deemti. Kanaaf namooti akkanaa kun duri hirbuu kan seenan fayidaa qabsoo irraa argachuuf malee qabsoof bu’aa buusuuf hin turre. Gaafa gaaffii qabsoo hadhooftuu isaanitti dhuftu, qabsoo keessaa ni godaanu. Kana gochuuf kaleessa waanta jedhan hunda dagatanii saalfii fi safuu tokko malee waanta biraa dubbachuu irratti kan isaan dursu hin jiru. Kanaaf namoti akkasii kun warra qabsoo irraa fayidaa barbaadu malee qabsoof fayidaa kennu miti.
Yeroo hunda namootiin akkanaa kun olola dharaa oofuu fi facaasuu keessatti kan isaan qaqabu hin jiru. Isaan malee kan qabsoo keessa jiru bakka hin qabu. Waanta hunda gochaa kan turanii fi qajeelchuuf yaalii godhanii kan itti rakkatan ta’uu fi fallii fi malli hunduu harka isaanii akka jirutti namatti ololu. Garuu keessi isaanii duwwaa dha. Qabsoo keessatti maal gumaachitan jedhee namni isaan gaafatu, isaaniif diina. Nama isin malee qabsoon hin jirtu, kana booda qabsoon dhumateef nama jedhu wajjin hariiroo uummatu. Madaala hin qabne irra of kaa’u. seenaan isaanii garuu faallaa isaani ololaanii ti.
4. jaallan yeroo jalaqabaa qabsoo waadaa galan dandeettii dhabuu fi dhibee gara garaan qabsoo irraa of moggeessu. Isaan kun hirbuu cabsuun otoo hin taane, humna itti dhabuu irraa kan maddee dha. Isaan kana dhaabnis akka qaama isaatti fudhatee kabajaan gaggeessa.
5. hadhaa qabsoon baattu dhamdhamuu dadhabuun qabsoo jalqaban karaatti kutu. Isaan kun amilee fi abdii kutannaa irraa kan dhufe, warra karaatti afanii dha. Isaan kun qabsoo irraa fayidaa isaan barbaadanis hin jiru. Garuu ifachuu irraa kan ka’e qabsoo irraa of moggeessu. Eega qabsoo irraa bahanii booda dhimma keessa turan irratti yakkaa fi daba hin dalagan. Duras dadhabanii waanta qabsoo keessaa bahaniif dhimma dhuunfaa isaanii malee dharaa fi soba uumuudhaan olola rakasha hin oofan.
Kaanaf mooraa qabsoo oromoo keessatti namni dhuunfanis ta’ee gareedhaan yeroo dhaaba keessa ture irraa of moggeessu, sababa jiru sirnaan beekuun gaarii dha. Namni qabsoo keessatti qooda muldhataa fi qabsa’ota hunda biratti kabajaa fi jaalaa qabu qabsoo irratti lafaa ka’ee labsa baasuuf hin yaalu. Qabsoo sana keessatti qooda guddaa fi muldhataa waanta qabaachaa tureef, sirreessuuf dhama’a malee diiggaaf qabaa gadi nadhiisaa hin jedhu. Tarii haalli ta’uufii didee ykn yaadaa fi yaaddoo inni qabu, yeroof fudhatama dhabee yoo rakkate, qabsoo keessaa bahee yeroo fudhatee ilaala malee, duula diiggaa irratti hin banu. Seenaa qabsoo keessatti namootiin qabsoof gumaacha muldhataa baasan, of imuu fi olola rakashaan dhaaba yakkuuf yaalii hin godhan.
Jaallan qabsoo keessatti hadhaa qabsoon qabdu dhamdhamanii beekan yeroo hunda dhaaba isaaniif qusannoo qabu. Jiruuf jireenya waanta itti dhabaniif, haalli jiru isaan gammachiisuu baatus, battalumatti diina ta’anii irratti hin ololan. Yeroo, qabeenyaa fi dandeettii isaanii qabsoof xuruuran waan ta’eef qabsoon isaan marara.
Faallaa kanaa warri qabsoo irraa fayidaa argachuu malee, qabsoof fadaa kennuuf dhaaba keessatti amatamanii turan, dhaaba diiguuf xurunbaa qaban hunda itti afuufu. Isaan malee dhaabicha keessa akka qabsa’onni jiran, gurra qabatanii ija dunuunfatanii waakkatu. Madaallii qabsoo keessatti hin qabne ofiif kennu. Waan hin qabneen yeroo of waaman dhugaa itti fakkaata. Namni biraas kan isaan jedhan dhugaadhuma jedhee waan isaaniif ragaa bahu itti fakkaata. Kana irraa ka’anii waca torbaan tokkoof gabaa dhaabbatu. Qabsoon bifa kanaan deemu hin jiru. Dhuma irratti namuu waanta isaan beekuuf waca torbaan tokkoo booda daldaala biraa keessa seenu.
Kanaaf namuu qabsoo wajjin jalqaba malee wajjin fixuuf adeemsa qabsootu dhugaa bahaa deema. Hirbuu fi waanan qabsoo jaallan wajjin jalaqaban, amaluma qabsoo ta’ee, adeemsa keessa wajjin xumurachuun hin danda’amu. Kanaaf mooraa qabsoo keessatti yeroo namni lamas namni sadiis ol ka’ee ibsa baasu, qaaniin kanuma abbaa sanaati malee qabsoo keessatti jijjiramni isaan fidan hin jiru. “Dubbii Amma Takfkii Geessu Dhidhiibanii Amma Sangaan Gahuun” soba irratti soba dabalachuun ala gatii hin qabu.
6 Comments	Abdelachancho74@ovi.com said,
March 23, 2013 @ 9:54 pm
Galatoomi jabaadhu jajjabaadhu qalamnikee haamirgisu.
March 24, 2013 @ 4:05 pm
Obbo Baqqaanaa yaada keef galatoomi. Dhugaadha barruu keessatti, itti gargaaramni loqodaa fi jechootaa tarii akkuma atuu jette naannoon itti dhaladhe dhiibbaa akka narratti godhee jiru hin wallaalu. Rakkoo loqodaan namootii dhaamsa kiyya hubachuu dadhabdan dhiifa. Ana duwwaa otoo hin taane, hundi keenyaa jechootaa fi loqoda garaa garaatti fayyadamna. Kaayyoon barruu kiyyaa literature Oromoo giddu galeessa kan taasifate miti. Amman danda’etti akka namaaf hubatamuu danda’utti barreessuuf yaale. Dhugaa dubbachuuf ani nama literature Oromoo irratti dandeettii ykn isaan eebbifame miti. Ammanaa kan nabarsiisan abbaa fi haadha kiyya galateeffadha. Dhaloonni haaraan kana sirriitti dhuunfata waan ta’eef dhalota haaraa irraa barachuu dandeenya. Kanaaf ani qophee dha. sirreessa keef galatoomi.
Haata’uu garuu jechooti Oromoo edduu dha. kan jiran keessa tokkotti dhimma bahuun ammeenya hin qabu, fakkeenyaaf
Baqqaanaa keenya, Baqqaanaa keenna, Baqqaanaa koo, Baqqaana kiyya, Baqqaanaa too …..kkf jechoota Oromoon dhimma itti bahuu dha. isaan kana keessaa isa kamtu afuu qaba jedhamee akka itti murta’e hin beeku.
Loqoda Oromoos yoo ilaalle akkanuma edduu dha. loqoda Oromoo dhaloota naannoo gara garaa yeroo dhaggeeffatu akka dammaa namatti tolu. Itti gammadda. Fakkeenyaaf “ilma koo maaloo nyaa’u, a’aa xiqqoo ishee itti siicororsa” loqodi kun naannoo tokkotti dubbatama. “ilma koo maaloo nyaadhu, dhadhaa xiqqoo ishee itti sii cororsa” loqoda kana lachuu yoo ilaalte kanuma Oromoo ti. Yeroo dhaggeefatu ni mi’awa. Garuu maal jechaa akka jiran baruuf dalga namatti ta’a hin se’u. tarii Baqqaanaa kiyya loqodi kiyyas bifuma kanaan naannoo itti dhaladhetti najalaa cillaaffate ta’a. maqaa Oromoo illee yoo fudhatte, fakkeenyaaf moggaasa maqaa ammachiisaan bahan yoo ilaalle: Baqqaanaa , waqgaarii, Daljeesso, Kumalaa, Barisoo, Soorii, badhaadhaa….. kkf yeroo moggaafatan, naannoo oromiyaa eessaa akka ta’e beekuun nama hin dhibu. Kana jechuun naannoon dhalootaa dhiibbaa nama irratti ni fida jechuu dha. yeroo ammaa illee kun afee jira. Ammachiisi maqaa Oromoo afee, Koket, feenet, lolboon, firbar… kkf moggaasuun fashina ta’eera. Ijoollee maqaa kana qabdu akkahoo ykn akaakayyuu isaaniin maal jechuudha jettee yoo gaafatte isaanuu hin beekan. Dubbii dubbiitu kaasa waanuma jedhaniifan kaase.
Kan biraa barreefama kiyya irratti yaadi naaf dhiyeessite barreefama walii gala jette keesse. Ta’uu mala. Kana caala gadi buusaanii maqaa namaa ykn murnaa dhahaniis barreessuun ni danda’ama. Isa hin filanne.
Dhuma irratti kaayyoon ykn dhaamsi barruu kiyyaa dhimma literature Oromoo giddu galeessa hin taasifanne. Dhaamsi isaa kan biraa dha. maalumaafuu yaada kee irraa waanta eddun baradhe galatoomi jedha.
Obboleessa koo Camadaa
Ulfaadhu haadhoo koo! Deebii bareedaa naaf kennite. Dhibbaa dhibbatti yaadakee nin fudhadha. Anis immoo yaada si quuqu kaasuu miti kaayyoon koo. Namni akkakee Afaan Oromoo bareechee barreessu kun osoo isa kana immoo itti dabalee ilaalcha jedhun qaba waan ta’eefi. Kana malees immoo hojiinkee kun seenaa dha, seenaan immoo ni darba, ni jiraata. Kanaafan caalaadhumatti akka dubbiinkee osoo walirraa hincitiin laphee nu seenuuf osoo gootee jedheeni. Tattaaffii mataa keetiin barattee akkas miidhagsitee katabuun kee ammoo guddaa natti tole. Jabaadhu, Rabbi si waliin haata’u.
bayan abadir said,
March 26, 2013 @ 10:16 pm
galatomii barreefamnii kee namaf ifaadha.garuu warreen irbuu saba hin beeknee fi saba isaa mal keessa akka jiruu hin beeknee biyyaa namatii wal nyaatuu ,wal jibbuu kana dachiin isaan haa jiibbituu irbuun oromo isaan ha qabduu mal jedhee akkan bareessuu hin beekuu galatomii camadaa
March 26, 2013 @ 10:17 pm
galatomii barreefamnii kee namaf ifaadha.garuu warreen irbuu saba hin beeknee fi saba isaa mal keessa akka jiruu hin beeknee biyyaa namatii wal nyaatuu ,wal jibbuu kana dachiin isaan haa jiibbituu irbuun oromo isaan ha qabduu mal jedhee akkan bareessuu hin beekuu galatomiaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!